Fampandrenesana fialan-tsasatra: Fotoana fialan-tsasatra amin'ny fetiben'ny lohataona QQPETS
Tady alika azo averina
Collar alika polyester
Tady alika polyester
Tady alika miasa
Fehin'alika sy vozon'akanjo ary tady
Vozon'akanjo sy tady vita amin'ny alika polyester
Nylon Dog Harness Collar sy Leash
tavoahangy rano biby
Manao ahoana daholo! Amin'ny fahatongavan'ny Fetin'ny Lohataona amin'ny taona 2019, QQPETS ny mpiasa rehetra dia mirary taom-baovao sambatra, fianakaviana sambatra ary mirary soa ho anao! Araka ny filazan'ny fetiben'ny Lohataona Nasionaly momba ny fialantsasatra ary miaraka amin'ny toe-javatra misy ny orinasa. Amin'ny fanapahan-kevitry ny fikarohana ataon'ny mpitarika. Ny fetin'ny Lohataona 2019 dia 27 Janoary 2019, hatramin'ny 11 Febroary 2019, mandritra ny 16 andro. Mba tandremo ny fiarovanao manokana mandritra ny fialantsasatra. Ataovy ny drafitra famokarana ary apetraho haingana araka izay azo atao ny baiko. Farany dia mirary fety sambatra sy am-pilaminana ho anareo rehetra aho amin'ny fetin'ny lohataona.
Manao ahoana daholo! Amin'ny fahatongavan'ny Fetin'ny Lohataona 2019, ny mpiasa rehetra QQPETS dia mirary taom-baovao sambatra, fianakaviana sambatra ary mirary soa ho anao! Araka ny filazan'ny fetiben'ny Lohataona Nasionaly momba ny fialantsasatra ary miaraka amin'ny toe-javatra misy ny orinasa. Amin'ny fanapahan-kevitry ny fikarohana ataon'ny mpitarika. Ny fetin'ny lohataona amin'ny taona 2019 dia27 Janoary 2019 hatramin'ny 11 Febroary 2019, mandritra ny 16 andro. Mba tandremo ny fiarovanao manokana mandritra ny fialantsasatra.Ataovy ny drafitra famokarana ary apetraho haingana araka izay azo atao ny baiko.Farany dia mirary fety sambatra sy am-pilaminana ho anareo rehetra aho amin'ny fetin'ny lohataona.
Précédent QQPETS fananganana ekipa
Ny Vozon'alika dia mampiasa orinasa fingotra: Iza moa aho?-qqpets MANARAKA
Guangzhou QQPETS Pet Products Co., Ltd., hita ao
Ny tanànan'i Guangzhou, faritanin'i Guangdong, dia naorina tamin'ny 2005.
Manam-pahaizana manokana amin'ny karazana vozon'akanjo sy leashes rehetra izahay,
harnesses biby fiompy, vozon'alika, tady alika, harness alika, vozon'ny saka
ary fandrafetana, famokarana ary fivarotana.
Mifandraisa amin'ny Sales ao amin'i Ms Cathy Lei
Adiresy: NO.23,Dalang Middle Road,Baiyun District,Guangzhou City,Guangdong Province,Shina